2018 New Zealand ASEAN Scholarship ပညာသင်ဆုများ လျှောက်ထားနိုင်
New Zealand ASEAN Scholarship 2018 Priority Sectors
- English Language Teaching (TESOL)
READ - ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲအတွက် မြန်မာစာဘာသာရပ်မေးခွန်းပုံစံ
၂. သို့ဖြစ်ပါ၍ လျှောက်ထားလိုသူ အရာထမ်းများသည် website: www.mfat.govt.nz/scholarships နှင့် ဆက်သွယ်၍ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ ကြည့်ရှုပြီး ယှဉ်ပြိုင် လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်းနှင့် တက္ကသိုလ်/ဒီဂရီ/ကောလိပ်များ အနေဖြင့် လျှောက်ထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အမည်စာရင်းနှင့် ၄င်းတို့၏ လျှောက်လွှာအပြည့်အစုံ (၄) စုံစီကို ထို ဦးစီးဌာနသို့ (၂၆-၂-၂၀၁၈) ရက်နေ့ မတိုင်မီ ပေးပို့တင်ပြရန် ဖြစ်သည်။
၃. နိုင်ငံခြားပညာတော်သင် စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၏ (၂၄-၁-၂၀၁၈) ရက်စွဲပါ စာမိတ္တူကို သိရှိနိုင်ပါရန်နှင့် လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန် ထိုစာနှင့်အတူ ပူးတွဲပေးပို့နိုင်ပါသည်။
မိမိတို့ တက်ရောက်လိုသည့် သင်တန်းကျောင်းများနှင့် ပုဂ္ဂလိက တက္ကသိုလ်များကို ရှာဖွေလိုပါက ဒီ Link မှာရှာဖွေနိုင်ပါသည်
More in this category: « ဗြိတိသျှကောင်စီက ပေးအပ်သည့် IELTS ပညာသင်ဆု	ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးစာရင်းဝင် ဘီလ်ဂိတ်ကပေးအပ်သည့် ပညာသင်ဆု »
၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Fulbright Foreign Student Scholarship Program အတွက် Full Scholarship ပညာသင်ဆုများ လျှောက်ထားနိုင်